Laza Razafiarison sy ny namany : Sazy mihantona 2 volana no didim-pitsarana – MyDago.com aime Madagascar
Nivoaka androany ny didim-pitsarana momba ny kandidà Laza Razafiarison sy ireo namany fito. Sazy mihantona 2 volana no didy navoakan’ny mpitsara ho azy ireo tamin’izany ny Alatsinainy 29 Jolay teo. Ny famoriam-bahoaka tsy nahazoana alalana, sy ny faniratsirana mpitandro ny filaminana no anisan’ny vesatra hiampangana azy ireo. Tsiahivina fa nanatanteraka hetsika ho fanoherana ny tsy fanatanterahana fifidianana teny amin’ny kianjan’ny Ralaimongo Analakely ny antoko Avotra ho an’ny firenena ny Alatsinainy 22 Jolay teo ary nitohy ny ampitson’iny izany. Nisy ny baomba mandatsa-dranomaso nalefan’ny mpitandro filaminana tamin’ireo mpanao fihetsiketsehana entina hanaparitahana azy ireo. Tamin’io fotoana io no nisamboran’ny mpitandro ny filaminana ity sekretera jeneralin’ny Avotra ho an’ny firenena ity sy ireo namany tamin’ny fomba tsy manaja ny zon’olombelona. Naiditra am-ponja vonjimaika izy ireo taorian’ny fakana am-bavany azy ireo. Ny Zoma teo no niakatra fitsarana I Laza Razafiarison saingy tsy namoaka didim-pitsarana ny mpitsara tamin’io fotoana io fa nahemotra omaly. Milaza ny hampiakatra ny raharaha eo anivon’ny fitsarana ambony ny mpisolovava azy 8 mirahalahy momba ity raharaha ity.
Auteur Solo Razafy*Publié le 29 juillet 2013 Catégories Politique
4 réflexions sur « Laza Razafiarison sy ny namany : Sazy mihantona 2 volana no didim-pitsarana »
Tsy taitra ry malagasy a ! ‘zany o ????
30 juillet 2013 à 3 h 02 min
Tena mendrika anao ny mari-boninahitra MAHERIFON’I MADAGASIKARA ry M. Laza. Ianao irery zao no sahy mijoro @ zao fotoana tena maha-latsaka ambany ny firenena izao. Ny sisa toa bla bla fotsiny. Ny andry Hajo zany dia ny fivarotana tany no mahamaika azy . Aiza ve ka tany tokony hiantoka ny hoa vin’ny taranaka mpianatra malagasy izao dia ho atakalo kianjana Golf hilalaovany sy ny mpanam-bola hoatra azy sy ny taranany. sur ko zaho fa mety izy ihany no ao ambadik’io opérateur saika hanao etrrain golf io. Tena olona mendrika ny fitsaram-bahoaka toa an-dradomelina.
Fa dia nidiran-doza iona loatra ny tanindrazako Andriamanitra ô????
Précédent Article précédent : kardinaly Gaetan Razafindratandra : notokanana androany ny tsangam-batony tao Besalampy.
Suivant Article suivant : SOLAHIMENA : MAMPIHITSOKA NY TOLONA AMIN’IZAO FOTOANA IZAO DIA NY TAFIKA SY ZANDARY